यो साताको राशिफल हेर्नुहोस् कस्तो होला तपाईको भाग्य ? – Khabar Patrika Np
यो साताको राशिफल हेर्नुहोस् कस्तो होला तपाईको भाग्य ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: ९:५२:५६
यो साता धार्मिक, सामाजिक र अरुको हित हुने काममा समय व्यतीत हुनसक्छ । विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका मिल्नेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ ।
यो साता धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । आकस्मिक यात्राको अवसर आउन सक्छ । सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । साताको उत्तरार्धबाट आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । सामान हराउने योगपनि छ ।
यो साता पारिवारिक र नाता गोताभित्रका सदस्यहरूसँग राम्रो व्यवहार पुर्याउन नसक्नाले विनाकारण झगडा र विवाद हुनेछ । मंगलवारबाट शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राको योग पनि देखिन्छ ।
यो साता आफ्नै प्रयासमा सुनिश्चित गरिएका कार्यबाट सफलता प्राप्तिको योग छ । लुकेको प्रतिभा र व्यवसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ । सवारी साधनको खरिद बिक्री हुने योग छ । सुखसुविधा भोग गर्न पाइनेछ र मन प्रसन्न रहनेछ । पारिवारिक वातावरण सुमधुर रहनेछ ।
यो साता रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेको छ । साताको अन्त्यमा अभिभावक वर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । व्यस्तता बढ्नुका साथै सामान हराउन सक्नेछ ।
यो साता अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । पुनर्मिलनको योग रहेको छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । वैदेशिक कार्य राम्रो हुनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला ।
यो साता खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन सक्छ । गरेका काममा ढिलासुस्ती हुनेछ कल्पना र भावुकतामा मन रुमल्लिने सम्भावना छ । सोमवारबाट मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्छ ।
नयाँ कार्यको अवसर मिल्नेछ । धार्मिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने समय छ । मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । आकस्मिक यात्राको अवसर आउन सक्छ । व्यवसायको सन्दर्भमा आदर्श ब्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभब मिल्नेछ ।
यो हप्ता रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । सुख सुविधा भोग गर्न पाइनेछ । प्रेम जीवन सबल र सफल हुनुका साथै आमदानीका स्रोत बढ्नेछन् । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईने र आकस्मिक रूपमा धनप्राप्तिको सम्भावना समेत छ ।
यो साता चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । लुकेको प्रतिभा र व्यवसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । रमाईलो यात्रा पनि होला ।
यो साता प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । मिहिनेतको राम्रो नतिजा हात पर्ने छ । ससाना यात्राबाट राम्रो फल मिल्नेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ । साताको मध्यमा सरकारी निकाएको भय रहला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ ।
यो साता दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूबाट समेत सहायता मिल्नेछ । नयाँनयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्ने छ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ला । ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल (अधिक जानकारीका लागि 977-9849559502)